लघुवित्तलाई कसरी अगाडि बढाउँने ? (प्रकाशराज शर्माको सटिक विश्लेषण) – Banking Khabar
लघुवित्तलाई कसरी अगाडि बढाउँने ? (प्रकाशराज शर्माको सटिक विश्लेषण)
प्रकाशराज शर्मा – लघुवित्तलाई श्रोतको आवश्यकता छ, त्यो श्रोत नभए अगाडी बढ्न गाह्रो हुन्छ । जस्तो एउटा फ्याक्ट्रीलाई वस्तु उत्पादन गर्न एउटा कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै लघुवित्तको कच्चा पदार्थ भनेको पूँजी हो । लघुवित्तको पूँजी भनेको अहिले सेयर होल्डरको रकम, ग्राहकहरुले बचत गरेको रुपैयाँ, रिर्जर्भ र सापटी हो । अहिलेको राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतसम्म लघुवित्त संस्था वा प्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहि नै लघुवित्त संस्थाको सापटीको श्रोत हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले वढ्दो कारोवारलाई श्रोतको अभाव देखिन्छ । यो भनेको कारोवारमा संकुचन आउन सक्ने अवस्था हो, जस्ले गर्दा वित्तीय पहुंचमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । अतः लघुवित्त बैंकहरुले वित्तीय श्रोत परिचालन गर्ने सम्वन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । बंगलादेशमा ग्रामीण बैंक जस्तो पव्लिक डिपोजिट खुल्ला गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसको लागि निश्चित शर्तहरु तोकि निश्चित सिमासम्म मात्र पनि पव्लिक डिपोजिट दिन सकिन्छ । कि त पव्लिक डिपोजिट दिनुपर्छ कि कतैबाट निश्चित श्रोत जुटाउनुपर्छ । त्यो वाहेक विकल्प छैन ।
लघुवित्त सुरुमा जिविकोपार्जन व्यवसायलाई लक्षित गरि सुरु भएको हो । तर अब हामीले लघुउद्यम व्यवसाय वढाउन लघुवित्त सेवा प्रयोग गर्नुपर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान हुनुपर्छ । यसको लागि अब साना तथा मध्यम परियोजना, व्यवसायिक कृषि आदिलाई लक्षित गरि कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । (लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मासँग बैंकिङ खबर डट कमले गरेको कुराकानीमा आधारित)